“ከዐቢይ ግድያ ሙከራ ጋር በተያያዘ የFBI መረጃ አለኝ…እኔም ተጠያቂ ነኝ” ኮ/ል ቢኒያም ተወልደ ጋር ቆይታ – Kichuu
HomeAmharic“ከዐቢይ ግድያ ሙከራ ጋር በተያያዘ የFBI መረጃ አለኝ…እኔም ተጠያቂ ነኝ” ኮ/ል ቢኒያም ተወልደ ጋር ቆይታ
“ከዐቢይ ግድያ ሙከራ ጋር በተያያዘ የFBI መረጃ አለኝ…እኔም ተጠያቂ ነኝ” ኮ/ል ቢኒያም ተወልደ ጋር ቆይታ
“ከዐቢይ ግድያ ሙከራ ጋር በተያያዘ የFBI መረጃ አለኝ…እኔም ተጠያቂ ነኝ” ኮ/ል ቢኒያም ተወልደ ጋር ቆይታ | ETHIO FORUM
Hiriira deeggarsaa MM Abiy irratti boombii darbachuun balleessaa kan jedhaman hidhaa hanga umurii guutuun adabaman
SAMUEL HABTAB GEBRU
(bbcafaanoromoo)—Hiriira deeggarsaa MM Abiy Ahimadiif waamame irratti namootni boombiii darbatan jedhaman hidhaa waggaa shanii hanga umurii guutuun adabaman.
A.L.I Waxabajji 16 bara 2011tti hiriira deeggarsaa MM Abiy Ahimadiif magaalaa Finfinnee Addabaabaayii Masqalaatti waamame irratti boombii darbachuun namoota shakkaman irratti, himanni yakka shororkeessummaa banamuun hidhaa waggaa shanii hanga umurii guutuu gahuun adabaman.
Namootni shakkamuun himataman Geexuu Girmaa, Biraanuu Jifaar, Xilaahun Getaachoo, Baahiruu Tolaa fi Dassaaleny Tasfayee jedhamu.
Himatamtoonni kunniin yaada adabbii hir’isuu dhiyeeffatan tilmaama keessa galchuun Manni Murtii Federaalaa Ramaddii 1ffaa Dhaddacha Farra Shororkeessummaa fi dhimmoota Heeraa mootummaa, namoota kanneen irratti murtee balleessaa dabarseera.
Boombii dhoosuun lubbuu namoota lamaa galaafatee namoota 50 madeessuun kan himatame Xilaahun Getaachoo hidhaa umurii guutuun adabeera.
Geetuu Girmaa hidhaa wagga 23’n, Biraanuu Jifaar waggaa 22’n, akkasumas Baahiruu Tolaa wagga 17’n adabeera.
Yakkicha himuu osoo qabuu kan dhokse Dassaaleny Tasfaayee ammoo hidhaa waggaa shaniin adabeera.
Konkolaataan ittiin socho’aa turan mootummaaf galii akka taatus manni murtichaa murteessuu miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaniiru.
MM Abiy Ahimad gara aangootti dhufanii osoo hin turiin, hiriirri deeggarsaa akka biyyaatti waamamee ture. Hiriirri kun magaalaa Finfinnee addabaabayii Masaqalaa irratti ture kan gaggeeffame.
Dr Abiy waltajjii irra osoo jiranii boombiin bakka itti dhiyoo jiru irraa dhohe.
Gareen BBC achi tures haala dho’iinsa boombiin booda ture akkasiin waraabee jira.
Dhohinsa boombichaan dargaggoonni Musaa Gaaddisaa jedhamu Wallaggarraa, akkasumas Yooseef Ayyaalew kan jedhamu Walaayittaarraa lubbuu dhabuun isaanii ni yaadatama.
Lammiileen 150 ol ta’an immoo madaa’aniiru.
Ministirri Muummee Abiy Ahimad haasawa erga balaan qaqqabeen booda ummataaf taasisaniin, ”Jaalalli ni mo’ata, ajjeechaan mo’atamuudha,” jedhanii ture.
Yaadni hammeenyaa keessan isiiniif hin milkoofne jechuun warra du’aniifi kan miidhamaniif gadda itti dhagahame ibsaniiru.
Wareegamni lubbuu har’a kanfalame kan yeroo hunda yaadatamu yoo ta’u, guyyaan har’aa mataansaa wareegamaan kan argame ta’uu yaa hubannu jechuun erga haleellichi dhaqqabee dubbatanii ture.
Kanaan dura angawoonni biyyattii, balaan boombii kun aggaammii lubbuu MM Aniy Ahimad irratti taasifamedha jedhanii dubbatanii turan.
Dr Abiy akkuma aangootti bahaniin haaromsa eegalaniin deeggarsa guddaa argataniiru. Haa tahu malee walitti bu’insiifi waldhibdeen siyaasaa iddoowwan garagaraa biyyattii keessatti mudatu dabalaa dhufuun, qormaata guddaa isaan mudate taheera.
Qophii Kibxataa. #VOAAfaanOromoo